I-COP26: Ishishini lezoKhenketho lifuna ukuba yinxalenye yesisombululo kutshintsho lwemozulu oluyingozi
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » News Sustainability » I-COP26: Ishishini lezoKhenketho lifuna ukuba yinxalenye yesisombululo kutshintsho lwemozulu oluyingozi
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • IKenya Breaking News • iindaba • abantu • Iindaba zaseSaudi Arabia zokuPhula • News Sustainability • komzila Ngoku • Iindaba eziHlumayo zase-UK
Ingxoxo yephaneli malunga nokhenketho njengesisombululo sokutshintsha kwemozulu
Iqela labaphumeleleyo kwiNguquko yeMozulu eyenziwe namhlanje: iSaudi Arabia, iKenya, iJamaica idibanisa amandla kwaye imema abanye kwiCOP26, iNkomfa yoTshintsho lweMozulu ye-UN.
Ukhenketho belukwi-ajenda namhlanje kwi-UN ye-26 Imozulu utshintsho Conference (COP26) ngaphakathi Glasgow, UK
Ukuhamba ukusuka kwiMarike yokuHamba yeHlabathi yaseLondon ukuya eGlasgow ukuya kuthatha inxaxheba kwiCOP26 yayingooHloniphekileyo. UMphathiswa wezoKhenketho eJamaica, u-Edmund Bartlett, uNobhala oHloniphekileyo wezoKhenketho eKenya uNajib Balala, kunye noHloniphekileyo, uMphathiswa wezoKhenketho eSaudi Arabia Ahmed Aqeel AlKhateeb
Umphathiswa waseSaudi wabeka ithoni yokhenketho ukuba idibanise imikhosi yokutshintsha kwemozulu kumazwi akhe.
Ezi nkokheli zintathu zokhenketho zivela eKenya, eJamaica, naseSaudi Arabia namhlanje zibeka ithoni kuhambo lwehlabathi kunye nokhenketho lwehlabathi kwiCOP26 eGlasgow.
Ukujoyina iMibutho yokwenza uKhenketho iNxalenye yeSicombululo yayiyingxoxo eyayimodareyithwa ngumongameli wangaphambili waseMexico Felipe Calderon.
Kwakhona kwiphaneli kwakukho uRogier van den Berg, uMlawuli weHlabathi, iWorld Resources Institute; URose Mwebara, uMlawuli kunye neNtloko yeZiko lobuChwepheshe beMozulu & Nenethiwekhi, UNEP; IVirginia Messina, i-SVP Advocacy, i-World Travel & Tourism Council (WTTC); UJeremy Oppenheim, uMseki kunye noMlingane oPhezulu, weNkqubo, uNicolas Svenningen, uMphathi weGlobal Climate Action, UNFCCC
HE Ahmed Aqeel AlKhateeb wathi kumazwi akhe:
Iindwendwe ezibekekileyo, Manene, namanenekazi.
Enkosi ngokuzimanya nathi apha namhlanje ukuxhasa iZiko leHlabathi loKhenketho oluZinzileyo.
Ukutshintsha kwemozulu ngowona mbandela ucinezela uluntu, yiyo loo nto silapha eGlasgow.
Emva kweminyaka emibini enzima yokuhamba kunye nokhenketho, ukuhamba kuyabuya.
Kwaye nangona ezi ziindaba ezimnandi kumashishini okhenketho kuyo yonke indawo, kufuneka siqinisekise ukuba ukukhula kwekamva kuhambelana nesijikelezi-langa sethu.
Uphando olupapashwe yiNdalo ngo-2018 lufumanise ukuba ukhenketho lunegalelo kwi-8% yokukhutshwa kwerhasi yegreenhouse yehlabathi.
Ingxelo ye-IPCC ka-2021 icace gca.
Sonke kufuneka sithathe amanyathelo angxamisekileyo nangqongqo, ngoku, ukunciphisa ifuthe lokutshintsha kwemozulu.
Ngoko ke, yintoni enokwenziwa?
IsiVumelwano saseParis sigxininisa imfuneko yokufumana izisombululo zokutshintsha kwemozulu ezihambelana nemfuno yokukhula koqoqosho nophuhliso loluntu.
Ukhenketho ngokungathandabuzekiyo lishishini elibalulekileyo kuqoqosho lwehlabathi.
Abantu abangaphezu kwezigidi ezingama-330 baxhomekeke kuyo ukuze baziphilise.
Ngaphambi kobhubhani, umsebenzi omnye kwimitsha emine edaliweyo naphi na emhlabeni wawukukhenketho.
Ishishini lezokhenketho, lihamba ngaphandle kokutsho, lifuna ukuba yinxalenye yesisombululo kutshintsho lwemozulu oluyingozi.
Kodwa, kude kube ngoku, ukuba yinxalenye yesisombululo kulula kakhulu ukuthetha kunokukwenza.
Kungenxa yokuba ishishini lokhenketho lahlulahlulwe ngokunzulu, lintsonkothile kwaye lahlukene.
Inqumla kwamanye amacandelo amaninzi.
Ngaphezulu kwezigidi ezingama-40 zamashishini okhenketho - okanye ama-80 epesenti yoshishino lonke - amancinci okanye aphakathi.
Ziiarhente zokuhamba, iindawo zokutyela, okanye iihotele ezincinci.
Abanabo ubunewunewu bamasebe azinikeleyo ozinzo
okanye uhlahlo lwabiwo-mali lophando nophuhliso olunxulumeneyo.
Kancinci kakhulu abakwazi ukufikelela kumaqela abacebisi bolawulo abahlawulwa kakhulu abanokubacebisa ngeendlela abanokuthi bawunqumle unyawo lwabo lwekhabhoni ngelixa begcina umgca wabo osezantsi.
Ngenxa yoko, ukuza kuthi ga ngoku, ishishini liye - nangona iinjongo ezintle - azikakwazi ukudlala indima epheleleyo ekuncedeni ukusombulula umngeni wokutshintsha kwemozulu.
Ngoku, ekugqibeleni, oko kunokutshintsha.
INkosana yaseSaudi Arabia, u-HRH Mohammed bin Salman ubhengeze indalo ngaphakathi kobukumkani beZiko leHlabathi lezoKhenketho eliZinzileyo.
Eli Ziko liza kuhlanganisa amazwe amaninzi, imbumba yamahlakani amaninzi.
Iza kubonelela ngesikhokelo esikumgangatho ophezulu kunye nobuchule kwicandelo, ukuze kuguqulwe indlela yethu ehlangeneyo yokujongana nozinzo.
I-STGC iyachulumancisa kuba iza kusebenza njengendawo yokuhlangana yabantu abavela kwicandelo lezokhenketho, oorhulumente, izifundiswa kunye nemibutho yamazwe ngamazwe.
Iziko apho siya kukwazi ukufunda kwezona ngqondo zibalaseleyo ngokuzinza kunye nokwabelana ngolwazi olunxulumeneyo kunye neyona ndlela ingcono yokusebenza, ukuze sikhawulezise utshintsho lwethu oludibeneyo ukuya kwikamva elingenaziro.
Ngokwenza oko khusela indalo kwaye uxhase uluntu.
Okubaluleke kakhulu, iya kusenza sikwazi ukwenza olu tshintsho ngelixa kwangaxeshanye ibonelela ngemisebenzi kwaye iqhuba ukukhula ngokuvuselela iinguqulelo ezintsha kunye nokuhambisa ulwazi, izixhobo kunye neendlela zokuxhasa ngemali.
Ndijonge phambili ekuxoxeni ngeZiko kunye neli gqiza libekekileyo, siphonononga indlela i-STGC eza kunceda ngayo utshintsho kushishino lwezokhenketho ukuya ekukhutshweni kwe-net-zero, kunye nokuqhuba amanyathelo okukhusela indalo nokuxhasa uluntu.